အမေးအဖြေများ - Ningbo Fanhao အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များ Co. , Ltd မှ
clean-up, tool ကို
Leash & မြင်းခြေလှမ်းကကြိုး
သေးငယ်တဲ့အမိန့်အဘို့, express ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအအမြောက်အများအမိန့်အဘို့, ပင်လယ်သင်္ဘောလမ်းအကောင်းဆုံးပေမယ့်အချိန်အများကြီးယူသည်။ အရေးပေါ်အမိန့်, ကြှနျုပျတို့လေကြောင်းရေကြောင်းကနေတစ်ဆင့်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဖြေနမူနာ:7ရက်အတွင်း;
တရားဝင်အမိန့်: အများအားဖြင့် 25 ရက်အတွင်းအတည်ပြုခြင်းပြီးနောက်။
A: စျေးနှုန်းသင့်ရဲ့ဝယ်လိုအား (Shape, အရွယ်အစား, အရေအတွက်) ကိုကို item ပေါ်တွင်မူတည်သည်
သင်လိုချင်သောပစ္စည်းအပြည့်အဝဖော်ပြချက်လက်ခံရရှိပြီးနောက် quotation အရိုက်တယ်။
ကျွန်တော်တို့သည် L ကို A / C, DA, DP, Long Term ခရက်ဒစ် T / T လက်ခံပါ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်တွေနဲ့အမှားတစ်ခုခုတွေ့ပြီဆိုလျှင်, ပထမဦးဆုံးမှာသူတို့ထဲကဓါတ်ပုံတွေကိုယူကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့ဒီကိစ္စကိုသည်အဘယ်အရာကိုအတည်ပြုနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံပို့လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်အပေါ် အကယ်. ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့်နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းဘို့သင့်ကိုလူသစ်တွေပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဆက်စပ်ရာကုန်ကျစရိတ်ကိုအပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များနှင့်လည်းဒေသခံတစ်ဦးလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အတွက်စေ့စပ်, စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်မှု၏ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်ဆောင်ကြဉ်းနှင့်လည်းကျန်းမာလမ်းတွင်နေထိုင်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများရောင်းချရာတွင်ပါဝင်နေနေကြသည်။
အမှတ် 23, Bldg ။ 3, Chuangxin 128 ပန်းခြံ, အမှတ် 818, Qiming လမ်း, Yinzhou Dist ။ , Ningbo, Zhejiang, တရုတ်
* CAPTCHA: အဆိုပါ select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. Truck ကား